Kismaayo News » Wararkii ugu danbeeyey Kismaayo
Wararkii ugu danbeeyey Kismaayo
Kn:Wali waxay ku suganyihiin magaalada Kismaayo, waxayna mar kale u hoyanayaan garoonka ayagoo ayna u suuro galin waftigii wasiirada inay gudaha u galaan magaalada.
Wasiiradu maanta waxaa markale u yimid saraakiil ka tirsan maamulka Jubaland oo ay muddo wadajoogeen iyagoo aan la ogeyn waxay ka wada hadleen. Fiidkii habeenimo ayaa ciidamada Alshabaab ay madaafiic ku garaaceen garoonka diyaaradaha oo ay wasiiradu kusugan yihiin waxaana jawaabo ka bixiyay ciidamada Kenya ee kusugan garoonka.
Waxba iskama baddalin dalabkii labada dhinac ee ahaa in wasiiradu ay galaan magaalada iyo maamulka oo iyaguna dalbaday in marka hore xildhibaanada daggan Hoteel Cascaseey laga soo saaro oo ay garoonka yimaaddaan marka hore si ay wasiiradu magaalada u galaan.
Arintan oo aan u kuurgalnay ayaa naloogu sheegey in maamulka Jubaland ay ka biya diideen qaabka xildhibaanada iyo wasiir ku xigeenka waftiga hoggaaminaya shaqada ay ka hayaan magaalada oo ay u arkaan iney tahay mid ka dhan ah maamulkooda. Maamulka ayaa ku doodaya in xildhdibaanadani ay dalbadeen markii hore iney habeen kaliya baryaan magaalada balse ay hadda sii marayaan todobaadyo. Iyadoo ay xaaladdaasi abuuran tahay ayaa haddana waftigani soo gaareen magaalada.
Waftiga wasiirada ah ayaa qorsheynayay inay maanta soo laabtaan balse baaqday iyadoo aan la ogeyn inay barito soo bixi doonaan iyo inklale. Dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weeraray dawladda Kenya isagoo kusugan magaalada Addisababa oo sheegey in Kenya ay bahdisho madaxda Soomaaliya waxaana isla markiiba jawaab ka bixiyay hadalkaas afhayeenka ciidamada AMISOM ee ciidamada Kenya oo sheegey in ciidamada Kenya ay hayaan shaqadoodii ayna Shabaab waddanka ka xoreeyeen balse ay magaalada Kismaayo leedahay maamul u gaar ah.
Xaaladaha ka abuurmay Kismaayo oo aad looga badbadinayo dawladduna saareyso culeys ka badan iyo mudnaan ka wayn midda Muqdisho iyo dalka oo dhan ayaan la ogeyn meesha ay ku dhamaan doonto.